दीपकराज गिरी भन्छन् : गणतन्त्रबादी रेखा थापा कसरी राप्रपा ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
काठमाडौँ । चर्चित कलाकार दीपकराज गिरीले काठमाडौँमा जारी राप्रपाको महाधिवेशनलाई लिएर आफ्नो धारणा सामाजिक संञ्जाल मार्फित सार्वजनिक गरेका छन् ।
शनिबार बिहान कलाकार गिरीले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन् । आज म लेख्दै छु, राप्रपाको चुनाव मेरो लागि लुतो न कन्याइ भएको टिप्पणी गरे। उनले नायिका रेखा थापाले राप्रपामा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएको बिषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘कलाकार रेखा थापाको उम्मेदबारी र यस सम्बन्धमा भएका बहसबाजीको बारेमा केही लेख्न मन लाग्यो, केही उठेका प्रश्नहरू भन्दै उनले प्रश्नोत्तर गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, १० गणतन्त्रबादी रेखा कसरी राप्रपा ?
आज म लेख्दैछू …… राप्रपा को चुनाब मेरो लागि लुतो न कनाइ हो कलाकार रेखा थापा को उम्मेदबारी र यस सम्बन्ध मा भएका बहसबाजी को बारेमा केहि लेख्न मन लाग्यो, केहि उठेका प्रश्न हरू …
१) गणतन्त्रबादी रेखा कसरी राप्रपा? कॉग्रेस एमाले मा पनि राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने बिचार राख्ने मान्छेहरू छन् ,अब उनिहरू कॉग्रेस वा एमाले हुन वा होइनन ? त्यसै गरेर राप्रपा मा पनि त राजा ल्याउनु हुन्न भन्ने धार पनि होला वा हुन सक्छ नि ……न रेखा त्यसमा पर्छिन् कि ?
२) रेखा थापा लाइ कुन्ता जी ले “ राजनीति ,फिल्म खेलेको जस्तो सजिलो छैन ” भन्नु भएछ , कस्ले भन्यो तपाइलाइ फिल्म खेल्न सजिलो छ भनेर… एकचोटी ट्राइ गरेर हेर्नु हुन्छ ?
क्यामारा अगाडि तपाइको पसिना छुट्ने छ !! संसारका सबै काम आ आफ्नो ठॉउमा गार्है नै हुन्छ त्यसैले कुनै पेशा लाइ सजिलो ठान्ने काम नगरौ हुनत: राप्रपा ले मेरो सिद्दान्त र बिचार लाइ प्रतिनिधित्व गर्दैन , एउटा कलाकार लाइ चुनाब जित्न का लागि सधै दलहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेको र उनिहरूलाइ कुनै पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वा पदहरू वाट बन्चित गरिदै आएको परिप्रेक्ष्यमा रेखा थापाले महामंत्री जस्तो महत्वपूर्ण पदमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नु लाइ मैले एक कलाकारको हिसाब ले स्वागत योग्य ठान्दछू र शुभकामना पनि दिन चाहन्छू !! तैले सक्दैनस, यो तेरो काम होइन , तेरो अनुभव छैन …यि शब्दहरू तिन्ले प्रयोग गर्छन जो आफै असक्षम छन् !!
प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०७८, शनिबार १२ : ३० बजे